Muuri News Network » Sawiro: Guddoomiye cusub ee G/Banaadir oo balan qaad muhiim ah ka helay Turkiga
Sawiro: Guddoomiye cusub ee G/Banaadir oo balan qaad muhiim ah ka helay Turkiga
Jan 31, 2018 - Comments off
Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow), Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan la qaatay Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya H.E. Olgan Baker oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada ay siiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan horumarinta gobolka Benaadir .
Eng. Yarisow ayaa marka hore uga mahadceliyey Safiirka doorka ay Turkiga ka cayaarto Soomaaliya oo uu sheegay in xiriirka labada dal ka dhexeeya uu tusaale cad u yahay taageerada aan shuruudu ku xirnayn. Waxuna tilmaamay in shacabka ku dhaqan Muqdisho ay si weyn uga dharagsan yihiin gacan siinta walaaltinimo ee Turkiya.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya H.E. Olgan Baker ayaa dhankiisa balan-qaaday in ay sii wadi doonaan garab istaaggooda dadka Soomaaliyeed, isagoo xusay inuu kala shaqeynayo maamulka cusub ee gobolka Benaadir dib-u-dhiska iyo horumarinta Caasimadda.